Doorashada oo ay ku tartameen saddex murashax ayaa wareegii Labaad waxaa u gudbay Labo mudane oo kala ahaa Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo Axmed Shariif.
Xildhibaanada ayaa Madaxweynaha Galmudug u doortay Axmed Ducaale Geelle Xaaf kadib markii uu helay codad gaaraya 54 mudane, halka ninka la tartamay ee Shariif uu helay 34 cod, sida ay sheegeen guddiga doorashada Galmudug.
Madasha wax lagu dooranayay waxaa joogay mas’uuliyiin uu kamid yahay wasiirka Arrimaha Gudaha dowladda Somalia iyo Xildhibaano katirsan dowladda dhexe.
Doorashada ayaa ahayd mid aad u xiiso badan, oo la isla gaaray ilaa labo wareeg.
Balse waxaa Muuqatay mas’uulka la doortay inuu ahaa midka taageerada ku leh Xildhibaanada.
Waa madaxweynaha ugu da’da weyn kuwa maamullada ka jira Somalia.
Xaaf ayaa kamid ahaa Xildhibaanadii hore ee Barlamanka Somalia isagoo sidoo kale ah ganacsade caan ah.
Mudada ka hartay xilhaynta Madaxda hadda jirta iyo Barlamanka ayuu mudane Xaaf hogaamin doonaa maamulka Galmudug.
Madaxweynihii ka horeeyay ee Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa dhawaan isu casilay sababo uu ku sheegay caafimaad darro, balse kusoo aaday xilli laga keenay Mooshin Xil ka qaadis ah markii lagu eedeeyay inuu kasoo bixi waayay shaqadii loo dhiibay.
Doorashadan ayaa dhacday xilli uu guul darraystay wadaxaajoodkii lagu doonayay in lagu hishiisiiyo maamullada Ahlu Sunna iyo Galmudug oo kawada taliya gobollada dhexe.
Xukuumadda Somalia oo war-murtiyeed kasoo saartay doorashada Galmudug
Soomaliya 06.05.2017. 18:45
MUQDISHU, Somalia- Xukuumadda Somalia, ayaa war-murtiyeed kasoo saartay doorashada Madaxweynaha Galmudug ee dhacday todobaadkii hore, taasoo uu kusoo baxay mudane hore oo katirsanaa Barlamanka Somalia (Xaaf).
5 qodob ayuu ka koobanyahay war-murtiyeedkaas, waxaan ...
​Wufuud Madaxweyne Gaas kamid yahay oo gaaray Cadaado
Soomaliya 29.05.2017. 12:25
​Doorashada Galmudug oo markale dib u dhacday [Dhageyso]
Soomaliya 29.04.2017. 14:34
Soomaliya 08.04.2017. 14:45
Ra'iisul Wasaare Kheyre oo ku baaqay in dib loo dhigo Doorashada Galmudug
Soomaliya 20.03.2017. 13:30